Showing posts with the label सङ्कलन तथा अनुवाद
उमाशङ्कर द्विवेदी अर्जुनले शुभद्रानन्दन अभिमन्युको लागि विराट कुमारी सुन्दरी उत्तरालाई स्वीकार गरे । त्यति बेला त्यहाँ इन्द्रका समान भेषभूषा धारण गरेका युधिष्ठिर पनि उभिएका थिए, उनले पनि राजकुमारी उत्तरालाई पुत्रवधूको रूपमा अ·ीकार गरे । तदन्तर भगवान् श्रीकृष्णको सामुन्ने राजकुमारी उत्तरा र अभिमन्युको विवाह सम्पन्न भयो । दाइजोमा राजा विराटले वायुका समान वेगशाली सात हजार घोडा, दुई सय हात्ती तथा धेरै धन दिएर । साथै राज्यपाट, सेनाका साथै ढुकुटीसहित आफूलाई पनि सेवामा समर्पण गरे । विवाह सम्पन्न भइसकेपछि युधिष्ठिरले भगवान् श्रीकृष्णबाट उपहारमा पाएका धनबाट धेरैथोक बाहुनहरूलाई दान गरिदिए । हजारौं गाईहरू, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, ओढ्ने–ओछयाउने तथा खाने–पिउने उत्तम वस्तुहरू अर्पण गरे । कुरुवीर पाण्डवगण अभिमन्युको विवाह सम्पन्न गरेर आफ्ना सुह्द यादवहरूसहित बडो प्रसन्न भए तथा रात्रिमा विश्राम गरेर अर्को दिन बिहानै राजा विराटको सभामा पुगे । सबभन्दा पहिले समस्त राजाहरूको माननीय र वृद्ध विराट र द्रुपद आसनमाथि विराजमान भए, अनि पिता वासुदेवका साथ बलराम र श्रीकृष्ण आसनमाथि विराजमान भए । सात्य
पाण्डवहरूको अज्ञातवास– १५
उमाशङ्कर द्विवेदी मत्स्यराज विराट गाईहरूलाई मुक्त गराउनको लागि त्रिगर्त सेनातर्फ गएपछि दुर्योधनले मौका छोपी आफ्ना मन्त्रीहरूका साथमा विराटनगरमाथि आक्रमण गरिदिए । भीष्म, द्रोण, कर्ण, कुप, अश्वत्थामा, शकुनि, दु:शासन, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, दुर्मुख, दु:शल तथा अन्य अनेकौं महारथिहरू दुर्योधनका साथमा थिए । कौरव वीरहरूले विराट राजाका साठी हजार गाईलाई चारैतिरबाट आफ्ना रथहरूको पङ्क्तिले घेरेर लग्न थाले । उनीहरूलाई रोकेपछि मारकाट हुन थालेपछि गोठालाहरू कौरव वीरहरूको सामुन्ने अडिन सकेनन् तथा उनीहरूबाट चुटिएर रुन कराउन थाले । गोठालाहरूको नाइके रथमा सवार भई अत्यन्त दीनझैं रुँदै कराउँदै नगरमा आए । ऊ सरासर राजमहलको ढोकामा गई रथबाट ओर्लेर भित्र गयो । त्यहाँ उसले विराटको पुत्र भूमिञ्जय (उत्तर)लाई पायो । गोठालाका नाइकेले उनैलाई सम्पूर्ण समाचार सुनायो तथा भन्यो– राजकुमार, तपाईंका साठी हजार गाईलाई हरण गरेर कौरवहरूले लग्दै छन् । यस बेला महाराजाले आफ्नो अनुपस्थितिमा तपाईंलाई नै यहाँको प्रबन्ध सुम्पेर गएका छन् । राजसभामा तपाईंको प्रशंसा गर्दै राजाले भन्ने गर्दथे– मेरो यो कुलदीपक पुत्र मेरै अनुरूप त
- उमाशङ्कर द्विवेदी कद्रूका नाग पुत्रहरूमध्ये शेषनाग नाम गरेका एउटा नाग थिए । उनले भाइहरूको दुष्टता तथा किचलोको कारण आमा र अन्य दाइभाइसित विरक्त भएर कठिन तपस्या गर्न थाले । उनी केवल हावा पिएर तपस्याको पूर्ण पालना गर्दथे । उनी आफ्नो समस्त इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर गन्धमादन, बद्रीकाश्रम, गोकर्ण तथा हिमालय आदि ठाउँहरूमा एकान्त बास तथा पवित्र तीर्थाटन पनि गर्दथे । कठोर तपस्याका कारण शेषनागको जीउको मासु, छाला तथा नाडीहरू सुकिसकेको देखेर ब्रह्माजी उनको धैर्य र तपस्याले अत्यन्त खुशी भई उनको छेउमा आएर भने,“हे शेषनाग, तिमी यस्तो कठोर तपस्या किन गरिरहेका छौं ? तिम्रो चाहना के छ ? मलाई भन, म तिम्रो मनोकामना पूर्ण गरिदिने छु ।” शेषनागले भने,“भगवन्, मेरा भाइहरू मूर्ख छन्, यसकारणले म उनीहरूसित बस्न चाहँदिन । उनीहरू परस्परमा एक अर्कासित शत्रुवत् डाहा गर्दछन्, ठूलीआमा विनता र उनका छोरा गरुड र अरुणसित द्वेष गर्दछन् । त्यसै कारणले आजित भई म तपस्यारत भएको छु ।” ब्रह्माजीले भने,“शेषनाग, तिम्रा भाइहरूको जम्मै करतुतबारे मलाई थाहा छ । आफ्नी आमाको आज्ञाको उल्लङ्घनका कारणले तिनीहरू आपैंm ठूलो आपत्तिमा पर्ने
- उमाशङ्कर द्विवेदी ऋषि अयोदधौम्यको अर्को शिष्यको नाम उपमन्यु थियो । आचार्यले उपमन्युलाई गाईवस्तुको हेरचाहको जिम्मा दिएका थिए । उपमन्यु दिउँसभरि गाई चराएर बेलुकापख ऋषिको आश्रममा फर्की आई गुरुलाई नमस्कार गर्‍यो । आचार्यले सोधे–बाबू, तिमी निकै मोटोघाटो तथा बलवान देखिइरहेका छौ । तिमीले के खाने पिउने गरेका छौ ? शिष्यले भन्यो–गुरुज्यू, म भिक्षा मागेर खान्छु । आचार्यले भने–बाबू, मलाई भिक्षामा पाएको अन्न निवेदन नगरेर तिमीले खानु उचित भएन, अबदेखि भिक्षाको अन्न न खानू । उसले आचार्यको आज्ञा पालन गर्‍यो । अब उसले मागेको भिक्षाको अन्न ल्याएर गुरुलाई निवेदन गरिदियो तथा गुरुले त्यसलाई भण्डारमा थन्क्याइदिए । ऊ फेरि दिउँसभरि गाई चराएर आश्रममा फर्किन्थ्यो तथा गुरुलाई नमस्कार गर्दथ्यो । एक दिन गुरुले फेरि सोधे–बाबू, तिमीले मागेर ल्याएको भिक्षान्न म लिएर राखिदिन्छु । यस्तो स्थितिमा अब तिमीले के खाने गरेका छौ ? शिष्यले भन्यो–गुरुज्यू, अचेल मैले पहिले मागेको भिक्षान्न हजुरलाई दिएर फेरि भिक्षा मागी आफ्नो जीविका चलाउँछु । आचार्यले भने–यो त ठीक भएन बाबू, यस प्रकार तिमी अन्य भिक्षार्थीहरूको जीविकामा बाधा पुर्
तीन साँढेहरु र स्याल
- उमाशङ्कर द्विवेदी कुनै वनमा तीनवटा साँढेबीच एक आपसमा मित्रता थियो । तीनै साँढेहरू एक अर्कासित कहिल्यै पनि छुट्टिदैनथे । वनका कलिला घाँसपात तथा स्याउला मिलीजुली चर्थे, खान्थे । स्वच्छन्द घुमाइ र प्रशस्त खवाइका कारण तङ्ग्रिएर ती साँढे बेला–कुबेला कराएर वनका अन्य प्राणीहरूलाई तर्साउँदथे । मोटा घाटा तथा हृष्टपुष्ट ती तीन साँढेहरू फुर्सत्को क्षण पोखरीमा पानी खाई ढिस्को थुम्काहरूमा सिङले हानेर वा एक आपसमा सि·ौरी खेलेर समय बिताउँदथे । अन्य वन्य प्राणी उनीहरू सि·ौरी खेल्दा वा ढिस्को थुम्कामा सिङले हानेको देखेर तर्सिएर भाग्दथे । उनीहरू एक आपसमा भिड्दा अरू–अरू प्राणीहरूले तिनीहरूबीच मेल नरहेको लख काट्दथे तर तिनीहरूबीच घनिष्ट मित्रता तथा एकता थियो । एक दिन ती साँढे नित्यझैं दिउँसोको समयमा पोखरीको पानी खाएर ढिस्को तथा थुम्काहरूमा आआफ्नो बल प्रदर्शन गर्दैथिए । बेला–बेलामा मदातिरेकका कारण ठूलो स्वरमा कराउँदै पनि गरिरहेका थिए । उनीहरूको गर्जना सुनेर वनको राजा बाघ तर्सेर भाग्दै गर्दा एउटा छट्टू स्याल देखा पर्‍यो । तर्सेर बाघ पुच्छर लुकाएर भागिरहेको देखेर ऊ छक्क पर्‍यो । ऊ बाघ नजिक गएर सोध्य
सुनको सुली गर्ने चरा
- उमाशङ्कर द्विवेदी पर्वतीय प्रदेशमा एउटा ठूलो रूख थियो । त्यस रूखमाथि सिन्धुक नामक एउटा चरा बस्दथ्यो । त्यस चराको सुली सुनको हुन्थ्यो । एक दिन एउटा ब्याधा शिकार गर्नका लागि त्यसै प्रदेशमा गयो । चराले ब्याधाको सामुन्ने सुली गर्‍यो । तत्काल त्यसको सुली सुनमा परिवर्तन भयो । त्यो घटनाले ब्याधा छक्क पर्‍यो । उसले मनमनै सोच्यो–हरे, चरालाई पासोमा हाल्ने गरेको यतिका दिन बित्यो तर मैले आजसम्म यस्तो घटना देखेको थिइनँ । कुनै पनि चराको सुली सुन भएको मैले देखेको थिइनँ । यस चरालाई जसरी पनि समात्नै पर्छ । यति सोचेर उसले त्यो चरा बस्ने रूखमाथि पासो थाप्यो । त्यो चरा मूर्खतापूर्वक पासो थापिएको हाँगामा गएर बस्यो । न भन्दै चरा पासोमा पर्‍यो । ब्याधाले चरालाई सजिलै समातेर पिजडामा हालेर घर फक्र्यो । घरमा आएपछि ब्याधाले सोच्यो–यस आपद्युक्त चरालाई मैले के गर्ने ? यदि कसैले यो चरालाई देखेर यसको बानी थाहा पायो भने गएर राजालाई भनिदिनेछ । राजाले यो कुरा थाहा पाएपछि ममाथि ठूलो सड्ढट आइपर्नेछ । अत: मैले आफैंले लगेर राजालाई यो चरा टक्र्याउनु बेस हुनेछ । यति सोचेर ब्याधा आफैं त्यो चरा लिएर गई राजालाइ टक्र्याइदियो
- उमाशङ्कर द्विवेदी कार्तिक महिनाको शुक्लपक्ष चौथी तिथिबाट छठ पर्वको शुरुआत हुन्छ । छठमा गरीब वा धनी जोसुकैको घरमा छठ पूजा धुमधामका साथ मनाइने परम्परा रहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने छठ पूजा उत्सवको रूपमा मात्र नभई कठिन व्रतोपवासको रूपमा देखा पर्दछ । कठिन शुचिता, दृढ संयम, पूर्ण ब्रह्मचर्य, तथा नितान्त उदासीनताका साथ छठी माताको भक्तिपूर्ण आराधना गर्दा मात्र छठ पूजाको फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको पाइन्छ । अन्य व्रतहरूमा एक वा दुई छाक उपवास गर्दा मात्र व्रत सफल हुन्छ । कुनै कुनै व्रत निर्जला (पानीसम्म नखाने) वा फलाहारी पनि हुने गर्दछ भने छठ व्रतमा अठचालीस घण्टामा केवल एक छाक नून न हालेको (रसियाव–रोटी) मात्र ग्राह्य मानिन्छ । बाँकी समय निर्जला तथा पूर्ण उपवास गरेर छठी माताको पूजा गर्ने विधान रहेको छ । छठ पूजाको विशेषता उदाउँदो सूर्यलाई मात्र अघ्र्य नदिई अस्ताउँदो सूर्यलाईसमेत अघ्र्य दिनु पनि हो । यस प्रदेशका मानिसहरूले आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिको याचनामा केवल उदाउँदो सूर्यको पूजा र सम्मान गर्दैनन् अपितु अस्ताउँदो सूर्यलाई पनि उचित तथा समान पूजा र सम्मान गर्दछन् । वस्तुत: हिन
- उमाशङ्कर द्विवेदी नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धितर्फ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शारदा पत्रिकाको प्रकाशनपूर्वदेखि नै लागिपरेका थिए–कविका रूपमा । पछिका दिनहरूमा उनी महाकविको भद्रासनमा आरूढ भए पनि नितान्त कविता लेखन मात्रैमा सीमित नरहेर साहित्यको प्राय: प्रत्येक विधामा उनको कलम अवाध गतिले चलेको थियो । पद्य लेखनमा उनको विशिष्टता रहे पनि गद्य लेखनमा उनको कलम चमत्कारीरूपमा चलेको थियो जसको प्रख्यात नमुना हो लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह तथा उनका कथाहरू । फुटकर कविता, कविता सङ्ग्रहहरू, महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, चम्पूकाव्य जस्ता साहित्यिक विधाहरू मध्ये कुनै पनि अछुतो रहेन । रातभरिमा खण्डकाव्य (कुञ्जिनी), तीन महिनामा महाकाव्य (शाकुन्तल), अझै दश दिन मात्रैमा महाकाव्य (सुलोचना), संस्कृतका विविध छन्दमा लेख्न सक्ने जाँगर भएका कवि नेपाली साहित्यमा केवल लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मात्रै हुन् । उनलाई प्रथम दृष्टिमा देख्नेले–बत्ती धपक्क बलेजस्तो गहँुगोरो, गोलो पोटिलो मुखमण्डल, सलक्क ताछिएको चौडा निधार, चाक्लो छाती, साँढेको जस्तो पृथुल स्कन्ध, शालका झैं लामा लामा बाहु, ताराझै. चम्किलो केही खाजिरहने आँख
- उमाशङ्कर द्विवेदी कुनै पोखरीमा एउटा भारुण्ड चरा निवास गर्दथ्यो । उसको भुँडी एउटै भए पनि मुख दुईवटा थियो । एक दिन समुद्रको किनारमा डुलिरहँदा उसले एउटा अमृततुल्य फल फेला पार्‍यो जुन समुद्रको लहरले किनारामा ल्याइ पुर्‍याएको थियो । त्यस फललाई खाँदै उसको एउटा मुखले भन्यो–वाह, मैले समुद्रको लहरले बगाएर किनारामा ल्याएका सयकडौ अमृततुल्य फल खाएको छु तर यस फलको स्वाद त दिव्य तथा विलक्षण छ । यो देववृक्षको फल पो हो कि ? यस्तो स्वादिलो फल मैले आजसम्म खान पाएको छैन । पहिलो मुखको यस प्रकारको कुरा सुनेर दोस्रो मुखले भन्यो–भाइ, यदि यो फल तिमीले भनेजस्तो स्वादिलो छ भने अलिकति मलाइ पनि देऊ । म पनि यसको स्वाद चाखूँ । यो सुनेर पहिलो मुखले हाँस्दै भन्यो–हाम्रो त एउटै भुँडी छ, जुन मुखले खाए पनि भुँडीमैं जाने त हो नि १ यो मुखले खाए पनि त्यो मुखले खाएपनि भर्ने त भुँडी हो । त्यसैबाट तिमी तृप्ति लेऊ । अलग–अलग दुई मुखले किन खानुपर्‍यो ? बरु उब्रेको भाग हाम्रो प्रियतमालाई दिउँ, उसले पनि यसको स्वाद चाखेर सन्तुष्ट भएमा हाम्रो भलो हुन्छ । यति कुरा भनेर उसले उब्रेको फल आफ्नी प्रियालाई दियो । त्यो फल स्वाद मानी
शिकारी, बँदेल र स्याल
- उमाशड्ढर द्विवेदी वनको एउटा कुनामा एउटा शिकारी बस्दथ्यो । एक दिन शिकारको लागि ऊ वनमा निस्केको थियो । हिंड्दै जाँदा उसले अत्यन्त विशाल तथा कालो वर्णको एउटा बँदेल फेला पार्‍यो । सामुन्ने त्यस्तो अदभूत शिकार देखेर शिकारीले तत्कालै धनुषको डोरी कानसम्म तानेर तीखो वाणले त्यसमाथि प्रहार गर्‍यो । निशाना अचूक थियो । वाण सोझै बँदेलको जीउमा गएर लाग्यो । वाणको आघातले रन्थनिएर बँदेलले पनि आफ्नो अद्र्धचन्द्रकार भयानक दार्‍हा प्रहार गरेर शिकारीको आन्द्राभुँडी झारेर मारिदियो । शिकारीलाई मारेपछि वाणको आघातको कारण बँदेल पनि धराशायी भएर प्राण त्याग गर्‍यो । यसै बीच कतैबाट भोकले अत्यन्त पीडित एउटा स्याल त्यस ठाउँमा आइपुग्यो । मृत बँदेल र शिकारीको लाश आफ्नो अगाडि पाएर स्यालले मनमनै सोच्न थाल्यो–विधाता आज मेरो अनुकूल रहेछन् । त्यसै कारण आज मैले यति धेरै शिकार अनायास प्राप्त गरें । यसलाइ यत्नपूर्वक जोगाएर विस्तारै खानु बेस हुनेछ, जसले गर्दा धेरै दिनसम्म मेरो आहार चलिरहोस् । शास्त्रहरूमा लेखिएको पनि छ– शनै: शनैश्च भोक्तव्यं वित्तमुपार्जितम् । रसायनमिव प्राज्ञैर्हेलया न कदाचन ।। अर्थात् आफूले उपार्
जुम्रा र उडुस
- उमाशड्ढर द्विवेदी एउटा राजाको अत्यन्त सुखदायी शयनागार थियो । त्यस शयनागारमा आरामदायक ओछ्यान थियो । त्यस ओछ्यानमा अत्यन्त सुकिलो तथा सफा तन्ना ओछ्याइएको थियो । त्यस तन्नाको सन्धि (जोड)मा मन्दविसर्पिणी नाम गरेको एउटा जुम्रा बस्दथियो । राजाको स्वादिलो रक्तपान गरेर उसको समय आनन्दपूर्वक बितिरहेको थियो । एक दिन कतैबाट डुल्दाडुल्दै अग्निमुख नाम गरेको एउटा उडुस त्यस शयनागारमा आयो । त्यसलाई देखेर त्यहाँ रहेको जुम्राले भन्यो–अरे अग्निमुख, तिमी यहाँ कताबाट आइपुग्यौ ? यहाँ कसैले तिमीलाइ देख्नुभन्दा पहिले नै यहाँबाट भाग, नत्र भने तिम्रो ज्यान बाँच्ने छैन । उडुसले भन्यो–हेर, घरमा आएको कुनै अतिथिसित यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन । त्यो अतिथि दुष्ट नै किन नहोस, उसलाई भगाउनु उचित हुँदैन । मैले आजसम्म अनेक प्रकारका मानिसहरूको विविध स्वाद भएको रक्तको आस्वादन गरिसकेको छु । ती रक्तहरू मानिसहरूको आहार दोषको कारण तिखो, तीतो, कषाय तथा अमिलो थिए । आजसम्म मैले मीठो स्वादको रगत खान पाएको छैन । यदि तपाईं कृपा गरेर मलाई यहाँ बस्न दिने हो भने विविध प्रकारका व्यञ्जन, अन्न, पेय पदार्थ, चोष्य पदार्थ तथा अवलेह
- उमाशड्ढर द्विवेदी कुनै नगरमा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण बस्दथिए । उनकी स्त्री नक्कचरी तथा परपुरुषासक्त स्वभावकी थिई । आफ्नो पतिको आँखा छली उसले घिउमा पुरी पकाएर जारपतिलाई दिने गर्दथिई । एक दिन उसको पतिले घिउमा पुरी पकाएको देखे । उनले आफ्नी स्त्रीसित सोधे–प्रिये, यो के पकाएकी ? यो कसलाई दिने गरेकी छयौ ? मलाई साँचो कुरा भन । प्रत्युत्पन्नमति उनकी स्त्रीले भनी–यहाँबाट अलि पर देवीको एउटा मन्दिर छ । मैले देवीको व्रत लिएकी हुनाले विशेष प्रकारको पक्वान्न बनाएर देवीलाइ अर्पण गर्नको निम्ति लैजाने गरेकी छु । यति भनेर ब्राह्मणीले आफ्ना पतिको सामुने नै घिउमा पुरी पकाएर मन्दिरमा जान भनेर घरबाट हिडी । त्यसले यस प्रकार आफ्नो पतिलाई विश्वास दिलाउन चाहन्थिई कि उ वास्तवमा मन्दिरमा नै जाने गरेकी छे । किनकि पहिले उसले पतिलाई मन्दिरमा गएर पुरी देवीलाई अर्पण गर्ने कुरो भनेकी थिइ । देवीको मन्दिरमा गई पक्वान्नलाई मन्दिरमा नै छाडी ऊ नुहाउन भनेर नदीमा गई । नदीमा उसले नुहाइरहेको अवसर छोपी अर्को बाटोबाट गएर मन्दिरको एउटा अदृश्य कुनामा गएर लुकी बस्यो । स्नानपछि ब्राह्मणी मन्दिरमा आइ गन्ध, धूप, अक्षता पुष्
बाहुन, ठग तथा बोका
- उमाशड्ढर द्विवेदी कुनै नगरमा मित्र शर्मा नाम गरेका एकजना अग्निहोत्री बाहुन बस्दथिए । माघको महिनामा अत्यन्त शीतल बतास चलिरहेको थियो । वातावरण कुइरोले डम्म ढाकेको थियो । आकाशमा बादल लागेको तथा फुस्स फुस्स पानी परिरहेको थियो । मौसम जाडोको कारण कष्टकर भएको हुनाले उनी कुनै गाउँमा गएर कुनै जजमानसित पशुको लागि याचना गर्दै भने,“जजमान, आउने औंसीको दिन मैले यज्ञ गर्नुछ । अत: मलाई एउटा पशु दान गर ।” बाहुनको याचना सुनेर एउटा दयालु जजमानले बाहुनलाई एउटा ह्ष्टपुष्ट तथा मोटो बोका दिए । मोटोघाटो भएको हुनाले त्यो बोका हिंड्नमा असमर्थ थियो । लौरोले हाँक्न थालेपछि त बोका सोझो बाटो नहिंडेर यताउति गरेर पो हिंड्न थाल्यो । बोकाको यस्तो चाला देखेर बाहुनले हिंड्न सजिलो होस् भन्नाका खातिर बोकालाई उचालेर पिठयूमा बोकी घर जानलाई छिट्छिटो हिंड्न थाले । बाहुनलाई खाइलाग्दो बोकालाई पिठ्यूमा बोकेर हतारहतार हिंड्दै लगिरहेको तीनजना धूर्त ठगहरूले देखे । बोकालाई देखेर यस बोकालाई काटी पोलेर मासु खाइ जाडो छल्ने निधो गरे । अब बाहुनलाई ठगी कुन प्रकारले बोका हात पार्ने भन्नेबारे तीनैजनाले आपसमा सल्लाह गर्न थाले । सल्लाहअनुस
- उमाशड्ढर द्विवेदी कुनै नगरमा यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण बस्दथिए । उनकी स्त्री नक्कचरी तथा परपुरुषासक्त स्वभावकी थिई । आफ्नो पतिको आँखा छली उसले घिउमा पुरी पकाएर जारपतिलाई दिने गर्दथिई । एक दिन उसको पतिले घिउमा पुरी पकाएको देख्यो । उसले आफ्नी स्त्रीसित सोध्यो–(प्रिये, यो के पकाएकी ? यो कसलाइ दिने गरेकी छयौ ? मलाई साँचो कुरा भन । प्रत्युत्पन्नमति उनकी स्त्रीले भनी–यहाँबाट अलि पर देवीको एउटा मन्दिर छ । मैले देवीको व्रत लिएकी हुनाले विशेष प्रकारको पक्वान्न बनाएर देवीलाई अर्पण गर्नको निम्ति लैजाने गरेकी छु । यति भनेर ब्राह्मणी आफ्ना पतिको अगाडि घिउको पुरी पकाएर मन्दिरमा जान भनेर घरबाट हिंडी । उसले यस प्रकार आफ्नो पतिलाई विश्वास दिलाउन चाहन्थिई कि ऊ वास्तवमा मन्दिर नै जाने गरेकी छ । किनकि पहिले उसले पतिलाई मन्दिरमा गएर पुरी देवीलाई अर्पण गर्ने कुरो भनेकी थिई । देवीको मन्दिरमा गई पक्वान्न मन्दिरमा नै छाडी ऊ नुहाउन भनेर नदीमा गई । नदीमा उसले नुहाइरहेको अवसर छोपी अर्को बाटोबाट गएर पति मन्दिरको एउटा कुनामा गएर लुकिबस्यो । स्नानपछि ब्राह्मणी मन्दिरमा आई । गन्ध, धूप, अक्षता, पुष्प तथा नै
- उमाशड्ढर द्विवेदी कुनै वनमा खरनखर नामक एउटा सिंह बस्दथ्यो । एकदिन भोकले आकुल–व्याकुल भएर शिकार गर्नको लागि जानवरहरूलाई खोज्न यताउति भौतारिंदा पनि साँझसम्म कुनै जानवर फेला पार्न सकेन । सूर्यास्त भइसकेपछि उसले कुनै जानवर बस्ने एउटा रित्तो गुफा देख्यो । यस गुफाभित्र लुकेर बस्दा यसमा बस्ने जानवर रात परेपछि वास बस्न निश्चय नै आउला र त्यो जानवर आएर गुफाभित्र छिरेपछि त्यसलाई मारेर खाई भोक मेट्नुपर्ला भन्ने दाउमा सिंह त्यस गुफाभित्र छिरी शिकार ढुकेर बस्यो । रात परेपछि त्यस गुफाभित्र बस्ने दधिपुच्छ नाम गरेको एउटा स्याल आयो । गुफाको ढोकामा गएर हेर्दा त्यहाँ सिंहको पदचिन्ह देखापर्‍यो । गएको पद्चिन्ह त देखिन्थ्यो तर फर्केको पद चिन्ह देखा परेन । यो देखेर सिंह भित्रै छ भन्ने कुराको लख काटी स्याल निकै आत्तियो । स्याल मनमनै सोच्न थाल्यो–“हरे ! आज त ठहरै पर्नेवाला थिएँ । सिंह भित्रै छ कि गइसक्यो केही ठेगान छैन । अब म के गरूँ ?” यति सोचेर ऊ गुफाको ढोकामा गई अचानक हे गुफा ! हे गुफा !! भनेर दुईचोटि कराएर चुप लाग्यो । भित्रबाट कुनै किसिमको प्रत्युत्तर नआएपछि फेरि कराएर गुफासित सोध्यो–“अरे गुफा
बकुला र ग·टो
- उमाशड्ढर द्विवेदी कुनै वनमा अनेक जलचरहरूद्वारा सुशोभित एउटा पोखरी थियो । त्यस पोखरीमा विभिन्न प्रकारका भ्यागुता, माछा, सर्प, ग·टो तथा गोहीका साथै बकुलाहरू पनि निवास गर्दथे । बकुलाहरूमध्येको एउटा बूढो बकुला आफ्नो शक्ति सामथ्र्यले माछा समातेर जीविका चलाउन असमर्थ भइसकेको थियो । एकदिन ऊ अजस्रधारा आँसु चुहाउँदै पोखरीको डिलमा बसेर रोइरहेको थियो । त्यसलाई यसप्रकारले रोइरहेको देखेर एउटा ग·टो अन्य केही जलचर साथीहरूका साथ आइ उसको दु:खले दु:िखत हुँदै आदरपूर्वक सोध्यो–मामा, आज तपाईंले आफ्नो भोजनको प्रबन्ध गरिरहनुभएको छैन, केवल आँसु चुहाइ रोइ कराइ मात्र गरिरहनुभएको छ, के कुरा हो ? हामीलाई भन्नुस्, केही सहायता गर्न सकिन्छ कि ? ग·टोको कुरा सुनेर उसले भन्यो–तिमीहरूले ठीक अनुमान गर्‍यौ । माछाहरूलाई समातेर खाने कामबाट सन्यास लिएर प्रायश्चितस्वरूप आफ्नो प्राण त्याग्ने सड्ढल्पका साथ यहाँ बसिरहेको छु । त्यसै कारण समीपमा आएका माछाहरूलाई पनि नसमाती यहाँ बसिरहेको छु । बकुलाको कुरा सुनेर ग·टोले सोध्यो– मामा, तपाईंले यस प्रकार वैराग्य लिनुको कारण के हो ? बकुलाले भन्यो– म यसै पोखरीमा जन्मिएर बूढो भइसके
- उमाशड्ढर द्विवेदी ग·ाको तीरमा जप, नियम, तप, स्वाध्याय, उपवास आदि योग क्रियामा लागेर पवित्र जल तथा वनका कन्द, मूल, फल खाई जीउ सुकाई तपस्यारत केही ऋषिहरूको परिपूर्ण एउटा आश्रम थियो । त्यस आश्रमका कुलपति याज्ञवल्क्य नाम गरेका ऋषि थिए । एक दिन प्रात:काल ग·ास्नान पछि देवता तथा पितृहरूलाइ आचमन, पाद्य तथा अघ्र्य दिन उद्यत रहेका ऋषिको अञ्जुलिमा चिलले आफ्नो चुच्चोमा च्यापेको एउटा मुसाको बच्चा संयोगवश खस्न पुग्यो । ऋषि ध्यानमग्न अवस्थामा रहेका तथा अञ्जुलीमा सल्बाबलाइरहेको कुनै जीवित प्राणीको शिशुको प्राप्तिको आभास पाएर चकित भई हेर्दा त त्यो जीव मुसाको बच्चा पो रहेछ । ऋषिलाइ करुणा लागेर हृदय दया प्लावित भएर आयो । पूजा गर्ने बेला त्यस मुसाको बच्चालाई एउटा वटपत्रमाथि राखेर पुन: स्नान, आचमन तथा प्रायश्चित गरेर आफ्नो तपोबलले त्यस मुसाको बच्चालाई सुन्दरी केटीमा परिवर्तित गरिदिए । त्यसपछि ती केटीको साथमा उनी आश्रम फर्के र आफ्नी निस्सन्तान पत्नीलाई दिंदै भने–भद्रे, यस कन्यालाई लैजाउ तथा यसलाई आफ्नी पुत्रीझैं लालनपालन गरेर हुर्काऊ । पतिको आदेशानुसार ऋषिपत्नीले ममत्वपूवर्क लालनपालन र स्याहारसुसार गर्द